I-Constellation Pisces: izici, ukuthi ungayibheka kanjani nezinganekwane | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Konke izinkanyezi esibhakabhakeni zinencazelo nomsuka. Namuhla sizokhuluma nge ama-constisation pisces ezithathwa njengeziyishumi nantathu futhi zigcine kuzo zonke izinkanyezi zezinkanyezi. Kuyaziwa nangegama lezinhlanzi ezimele ukugeleza kwamanzi. Akuwona umlaza okulula ukuwuthola kulabo abangezona izingcweti ekubhekeni. Inkanyezi eyodwa kuphela yayo enkulu ingaphansi kobukhulu be-4 yize inkulu impela.
Kulesi sihloko sizokufundisa zonke izici, imvelaphi, izinganekwane nokuthi ungawubona kanjani umlaza wePisces.
2 Ukuqaphela ama-Pisces ezinkanyezi
3 Izinganekwane zamaPisces constellation
4 Izinkanyezi eziyinhloko
Ama-Pisces ezinkanyezi angabonakala lapho i-elliptical ne-equator yasezulwini zihlangana phakathi kwawo. Lokhu kwenzeka ngesikhathi sentwasahlobo futhi iphuzu lapho bewela khona laziwa njengephuzu le-vernal noma i-vernal equinoctial point. Inkanyezi enkulu yomlaza yi-α Piscium, eyaziwa nangamagama u-Alrisha noma u-Alrischa.
Kubhekwa njengenye yezinkanyezi ezinkulu kakhulu ngaphakathi kwezinkanyezi. Naphezu kobukhulu bayo obukhulu, akulula ukukubona. Ezindaweni ezisemadolobheni lapho kukhona ukungcola okuncane kuba nzima kakhulu ukubona le nkanyezi. Inkanyezi ekhanyayo inesilinganiso esingu-3.5. Labo ababona le nkanyezi bangayisebenzisa i-constellation kaPegasus ukuyithola. Le nkanyezi iyaziwa ngokuthi i-Autumn Triangle. Kuyasiza ukwazi ukubona iqoqo lezinkanyezi zePisces.
Kunezinhlobo ezahlukahlukene zemvelaphi yayo, yize zonke zinento ejwayelekile kakhulu ekhona. Lo msuka ukuthi unezinhlanzi ezimbili. Ukulandisa okuningi kwemvelaphi yale nkanyezi kuqhamuka ezinganekwaneni zamaGrikhi nezinganekwane zamaRoma.
Njengakumaqoqo ezinkanyezi i-Aquarius neCapricorn, itholakala endaweni yesibhakabhaka ezungezwe amanye amaqoqo ezinkanyezi asemanzini njengoba kunjalo "nolwandle" noma "amanzi." Igama lale nkanyezi lisuselwa esiLatin futhi lisho ukuthi "inhlanzi". Leli gama ngokusobala libangelwa ukubukeka okufana nenhlanzi. Uma ubhekisisa uyabona ukuthi zifana kanjani nezinhlanzi ezimbili ezihlanganiswe ngentambo.
Ukuqaphela ama-Pisces ezinkanyezi
Kuyinkanyezi ebonakala esibhakabhakeni njengenye yezinkanyezi zezinkanyezi. Kungabonakala kusukela ngoFebhuwari 22 kuya kuMashi 21. Sekuyiminyaka embalwa lokhu kwalungiswa njengoba bekususelwa kukhalenda laseBabiloni. Lokhu kwenza izinsuku zamanje lapho lesi sibonakaliso se-zodiac singabonakala khona ukuthi ziphakathi kuka-Mashi 12 no-Ephreli 18.
Uma sihlaziya yonke imilaza yezinkanyezi esendaweni "yolwandle" mikhulu impela. Iningi lazo lifiphele kakhulu, njengoba kunjalo ngaleli qembu lezinkanyezi. Iqiniso lokuthi linezinkanyezi ezimnyama ngesinye sezici ezenza kube yinkanyezi enzima kakhulu ukuyihlukanisa ngamehlo. Ngokuyinhloko ungabona isizini yasekwindla kusuka eningizimu nasentwasahlobo evela enyakatho. Usuku esilubalulile ngenhla olweNyakatho Nenkabazwe. Uma usesifundeni esiseningizimu kufanele ulinde isikhathi sokuwa.
Ukuze ukwazi ukuyifuna, kufanele ucabangele ezinye izinto. Okokuqala ukubheka lezo zinkanyezi ezikhanya kakhulu eziseduze nezingxenye eziyinhloko ezifanayo. Lokho wukuthi, izinkanyezi ezimbili eziyinhloko ezikhanya kakhulu yilezo zekhanda lenhlanzi nalelo lentambo. Ukuze uthole izinhlanzi ezibhukuda ngasenyakatho kufanele ufune i-constellation kaPegasus kuqala njengoba kulula. Le nkanyezi itholakala eningizimu yalokhu. Singayithola ngenkanyezi uMarkab. Ngale ndlela, sizohlaziya ikhanda eliya eningizimu futhi liseduze ne-constellation i-Andromeda. Intambo iyinkanyezi kanambambili i-Alrisha ekhanya kakhulu futhi elula ukuyibona.
Iqukethe izinto ezimbili zesibhakabhaka ezijulile. Lezi zinto ezimbili yi-galaxy evunguza i-M74, ne-NGC 520 eyakhiwe yimithala emibili eshayisanayo. Ngokuphathelene nazo zonke izinkanyezi nezinkanyezi ezisemngceleni ne-constellation yePisces singabona okulandelayo: entshonalanga yinkanyezi yama-Aries, iba yinkanyezi yokuqala yezinkanyezi. Ngasenyakatho esinakho umlaza uPegasus, u-Andromeda nonxantathu. Ekugcineni, ngaseningizimu sithola umlaza i-Cetus.
Izinganekwane zamaPisces constellation
Izinganekwane zamaGrikhi yizo eziholele kulolu hlobo lweqoqo lezinkanyezi. Kuyaziwa njengenganekwane yePisces. Kumele futhi kushiwo ukuthi isiko lamaRoma lihlobene nomsuka nencazelo yale nsumansumane. Kunezici ezithile ezingokomfanekiso zesiko laseBabiloni kusukela kulokhu Ungomunye wemilaza engama-44 emelwe kuleli siko.
Kukhona inganekwane ka-Eratosthenes ethi umsuka kaPisces wayengunkulunkulukazi uDerceto. UDerceto wayeyindodakazi ka-Aphrodite. Kufanele ukuthi ibe yimermaid noma into esondele kakhulu kuyo kwazise yakhiwa ngowesifazane ingxenye kusukela okhalweni kuya phezulu nengxenye kusukela okhalweni kwehle. Umehluko omkhulu nama-mermaid esinawo namuhla ezinganekwaneni ukuthi yayinemilenze emibili.
Le nganekwane ithi ngobunye ubusuku uDerceto wayeseduze kwechibi futhi wawela emanzini. Yize babenomzimba wesidumbu, babengakwazi ukubhukuda futhi babengakwazi ukuphuma emanzini bodwa. Inhlanzi enkulu yakwazi ukumhlenga futhi kulapho kuzalwa khona umsuka wophawu lwePisces. Imayelana nezidalwa ezimbili ezihlangene ngesikhathi sokutakula. Kungenzeka ukuthi lesi sithombe asibukeki sihle kuma-constellation Pisces, ngoba kucatshangwa ukuthi uPérez ngokwakhe owasindisa impilo nguyena owavela owakhe umlaza.
Ekugcineni sizoklelisa ukuthi yiziphi izinkanyezi eziyinhloko zale nkanyezi. Sesivele sishilo ukuthi yi-Alrisha noma i-Alrischa (α Piscium) neFum al Samaka (β Piscium). Kodwa-ke, yize kunezinye izinkanyezi ezingakhanyi kangako, nazo zibalulekile. Ogqamile nguKullat Nunu. Igama elithi Alrisha livela e-Arabhu futhi lisho intambo. Igama likhonjiswe kahle ngesikhundla salo enkanyezini futhi yilona elikhombisa ifindo phakathi kwalezi zingcingo zombili ikakhulukazi.
Ngiyethemba ukuthi ngalolu lwazi ungafunda kabanzi mayelana ne-constellation Pisces.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isayensi yezinkanyezi » Ama-Constellation pisces